August 2019 – Dhammadīpa
Posted on 24 Aug 2019 by Ashin Sopāka
“Just likeabeautiful flower,
which has colour, and has fragrance,
so are well-spoken words fruitful
for the one who does act on them.” Dhp 52
“Yathāpi ruciraṁ pupphaṁ,
Evaṁ subhāsitā vācā,
Saphalā hoti kubbato.”
အဆင်း အနံ့ ပြည့်စုံ၍ တင့်တယ်လှပသော စံပယ် စကား စသောပန်းသည် ပန်ဆင်သူအား အနံ့တည်းဟူသော အကျိုးကို ဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ ကောင်းစွာ ဟောကြားတော်မူအပ်သော (ပိဋကတ်) စကားတော်သည် လိုက်နာကျင့်ကြံသူအား အကျိုးကို ဆောင်နိုင်၏။
“Cũng giống như bông hoa
xinh đẹp có sắc có hương,
tương tự như vậy lời nói được
khéo nói của người có thực hành thì có kết quả.”
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, right speech
Posted on3Aug 2019 by Ashin Sopāka
“When one’s house is ablaze
The vessel taken out
Is the one that is useful,
Not the one left burnt inside.
“So when the world is ablaze
With the fires of aging and death,
One should take out one’s wealth by giving:
What is given is well salvaged.
“What is given yields pleasant fruit,
But not so what is not given.
Thieves take it away, or kings,
It gets burnt by fire or is lost.
“Then in the end one leaves the body
Along with one’s possessions.
Should enjoy himself but also give.
Having given and enjoyed as fits his means,
Blameless he goes to the heavenly state.” – SN 1.41
yaṁ nīharati bhājanaṁ;
Taṁ tassa hoti atthāya,
no ca yaṁ tattha ḍayhati.
Evaṁ ādittako loko,
dinnaṁ hoti sunīhataṁ.
Dinnaṁ sukhaphalaṁ hoti,
nādinnaṁ hoti taṁ tathā;
Datvā ca bhutvā ca yathānubhāvaṁ,
“မီးလောင်သော အိမ်၌ အကြင်အိုးခွက်ကို ထုတ်ဆောင်၏၊ ထိုအိုးခွက်သည် ထိုထုတ်ဆောင်သော သူ၏ အကျိုးငှါ ဖြစ်သကဲ့သို့ ထိုမီးလောင်သော အိမ်၌ အကြင် အိုးခွက်ကို မထုတ်ဆောင်၊ (ထိုအိုးခွက်သည်) မီးလောင်ခံရသကဲ့သို့—
ထို့အတူ လောကသည် အိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ သေခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း တပြောင်ပြောင် တောက်လောင်နေ၏၊ ထိုတောက်လောင်နေသော လောကထဲမှ ပေးလှူခြင်းဖြင့် ထုတ်ဆောင်ရ၏၊ ပေးလှူအပ်သော ဒါနသည် ကောင်းစွာ ထုတ် ဆောင်ထားပြီး (ဥစ္စာ) မည်၏။
ပေးလှူမှုသည် ချမ်းသာသော အကျိုးရှိ၏၊ မပေးလှူမှုသည် ချမ်းသာသော အကျိုးမရှိ။ ထိုမပေးလှူဘဲ ထားသော ဥစ္စာကို ခိုးသူတို့သည်လည်းကောင်း၊ မင်းတို့သည်လည်းကောင်း ဆောင်ယူနိုင် ကုန်၏၊ မီးလောင်တတ်၏၊ ပျက်စီးတတ်၏။
ထို့နောက် သေဆုံးသဖြင့် မိမိ သိမ်းဆည်းသော ဥစ္စာနှင့်တကွ မိမိကိုယ်ကို စွန့်ရ၏၊ ပညာရှိသည် ဤသဘောကို သိ၍ သုံးလည်း သုံးဆောင်ရာ၏၊ ပေးလှူလည်း ပေးလှူရာ၏။ ပေးလှူပြီး၍လည်းကောင်း၊ သုံးဆောင်ပြီး၍လည်းကောင်း အလှူ၏ အာနုဘော်အလျောက် အကဲ့ရဲ့ မခံရဘဲ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏”ဟု (လျှောက်၏)။
“Trong ngôi nhà thiêu cháy,
Vị ấy được sanh Thiên.”
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, dukkha, fire